Ibsa gurmuu barattoota Oromoo sadarkaa olaanaarraa kenname. – Ayyaantuu Online
[ July 26, 2021 ] SOCHII WBO OROMIYAA FI WARAANA ITIYOOPHIYAA LABSAME	Afaan Oromoo
[ July 26, 2021 ] Dhaamsa jaarmiyaa Danbalii Humna Qeerroo irraa ergame	Afaan Oromoo
[ July 25, 2021 ] Maqaa Qeerrootiin guddoo nagadamaa jira	Afaan Oromoo
[ July 25, 2021 ] Seife Nebelbal Radio Program – Interviews on July 25, 2021 (Amharic)	Amharic
[ July 25, 2021 ] OMN: OSFNA 2021 day 2	Afaan Oromoo
HomeAfaan OromooIbsa gurmuu barattoota Oromoo sadarkaa olaanaarraa kenname.
Barattoonni Oromoo bara baraan roorrifamaa jiraachuun dhaabbachuu qaba!
Onkoloolessa 21, 2020
Seenaa Impaayera Itoophiyaa keessatti barattoonni Oromoo roorroofi hacuuccaa guddaa keessa turanii wareegama ulfaataa kaffalaa as ga’an. Gootonni keenya har’a maqaan isaanii akka urjii qabsoo Oromootti kaafamu kanneen lubbuun darbaniifi lubbuunillee jiran gabatee barnootaa irraa ari’atamaafi barnoota isaaniirraa qabamanii hidhamaa turan. Hedduun isaanii barnoota isaanii sirnaan hordofuuf waan danqamaniif barnoota addaan kutanii kallattii adda addaan gara qabsoo saba isaanii tarkaanfachiisuutti murteeffatan. Gariin dirree qabsootti wareegamanii kaanis wallaansoo hadhaa’aa geggeessaa turan/jiru. Bara H/Sillaasee sababa gaaffii lafaatiif barattoonni Oromoo dararaa ulfaataa argan. Bara mootummaa Dargiis akkasuma hayyoonni qaroo sabaa ta’an kanneen egeree Oromiyaafi saba Oromoof abdii ta’an kichuutti galaafatamani. Bara EPRDF keessas bal’inaan barattoonni Oromoo gaaffii saba isaanii ofitti fudhatanii waan qabsaa’aniif ajjeechaa suukanneessaa, hidhaafi dararamni guddaan irra ga’eera. Barattooni akka Simee Tarrafaa Yuunversiitii Maqalee keessatti ajjeefamee reeffi maatiif gale akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda’ama. Barattoonni kanneen akka Alamayyoo Garbaa, Gaaddisaa Hirpaasaafaa sababa “gaaffiin Oromoo sirriidha” jedhamaniif hidhamanii lubbuun isaanii darbe. Barattoota qaxalee kan akka Jaagamaa Badhaanee, Dirribee Jifaarfaa yoo kaasne maqaa tarreessinee fixuu hin dandeenyu. Barattoonni Oromoo sababa gubachuu bosona Baaleetiin wareegaman, kanneen sababa teessoon bulchiinsa Mootummaa naannoo Oromiyaa gara Adaamaatti jijjiiramuufi magaalaan guddittii Oromiyaa ta’uun jijjiiramuu sirrii akka hin taane falmanii lubbuu isaanii dhabaniifi kanneen barnoota isaaniirraa ari’aman, kanneen sababa master pilaanii ajjeefamaniifi barnoota itti dhaban tarrisanii fixuun hin danda’amu.
Kana qofa utuu hin taane, baruma dabarsine kana bara 2019 keessa barattoonni Oromoo bedduun Yuunversiitiilee adda addaa keessatti ajjeefamanii hedduun isaaniimmoo barnootarraa ari’atamaniiru. Sababa akka waliigalaatti roorroon uummata Oromootti hammaateef barattoota hedduu of biraa dhabnee bara kana of biratti arguu hin dandeenye.
Kana hunda kan kaasuu yaalleef seenaa himuuf utuu hin taane, rakkoo walfakkaataa akkasii keessummeessaa fuuldurattis itti fufuu waan hin qabneefi. Rakkoon barattoota Oromoorra ga’u gaafa rakkoon Oromoo akka waliigalaatti furamu furmaata argata jennee amanna.
Kana waan ta’eef, furmaanni waaraan argamee barnoota keenya qalbii nagaan itti fufnee saba keenya utuu hin baratiin nu barsiise tajaajiluuf qabxiilee ejjennoo armaan gadii baafanneerra:
1. Akka waliigalaatti Oromoon sirna bulchiinsa biyya kanaa keessatti nagaa argatee hin beeku; mootummaa mataasaas hin qabu. Nagaan waaraa argamuuf sabni keenya Mootummaa mataasaa ijaarratee ofiin of bulchuu qaba.
2. Biyya nagaan waaraafi tasgabbiin jirutti sabni keenya ilmaan isaa sammuu qulqulluun barsiifachuu danda’a. Nagaan waaraa argamuuf Oromiyaan nagaa taatee Lammiileen Oromiyaa waloon mootummaa ijaarratanii ittiin buluu qabu. Kana gochuuf ammoo mootummaan bara bulchiinsa isaa fixaxee jiru kun uummata keenyarra beekamtii akka hin qabne beekamuu qaba.
3. Mootummaan bara aangoo isaa fixate kun humna qawween itti fufuu barbaada. Humni kamuu ammoo humna uummataa ol waan hin taaneef, uummanni keenya sagaleefi miira wal fakkaataan ka’ee ofiisaafi biyya isaa baraaruu qaba.
4. Nuti barattoonni Oromoo haala gaaga’ama nageenyaafi goolama siyaasaa biyya kana mudate keessatti gara Yuunversiitii deemnee barachuudhaaf wabii nageenyaa hin qabnu. Biyyi kun mootummaa waloo qabaattee ittiin bulaa hin jirtu. Kun mooraa Yuunversiitii keessatti nageenyaa keenyaaf sadarkaa olaanaatti yaaddessaadha. Yeroo olaantummaan seeraa hin kabajamneefi qaamni badii dalage bakka itti gaafatamu hin jirretti gara mooraa barnootaatti deebi’uun nuuf balaa guddaadha jennee amanna.
5. Yeroo Mootummaan seera qabeessaafi fudhatama qabu hin jirretti oliifi gadi sochoonee barnoota itti fufuun hin danda’amu. Rakkoo kana keessaa baanee mootummaa keenya ijaarrachuuf labsii Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ijaaruu ABOn labse nutis ofitti fudhannee hojiirra oolmaa isaaf hojjechuun murteessaa ta’ee argameera. Uummanni keenyas yaada kana ofitti fudhachuun Mootummaa Ce’umsaa ijaarratee gara nagaafi dimokiraasiitti deemuu akka qabu dhaammanna.
6. Barattoonni Oromoo sadarkaa gadiirra jirtan, hayyoonni Oromoo, dhaabbileen amantaa, Abbootiin Gadaa, dhaabbileen hawaasaafi ogummaa, Qonnaan bultoonni, daldaltoonni, qaamonni nageenyaafi hojjetoonni mootummaa hunduu waamicha ykn labsii ABOn Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ijaaruuf labse kana ofitti fudhachuun fala filannoo hin qabnedha.
7. Barattoota Oromoo dabalatee uummanni keenya kan duraa caalaa tokkummaan dhaabbatee rakkoo amma mudate kana Mootummaa Ce’umsaa ijaarrachuun furatee gara mootummaa ofiisaa ijaarrachuutti akka deemu dhaammanna.
8. Barattoonni Oromoo gara Yuunversiitii Naannoo Amaaraa akka hin deemne gad jabeessinee hubachiifna. Bara darbe barattoonni 10 ol mooraa Yuunversiitiiwwan Naannoo Amaaraa keessatti lubbuun isaanii darbeera. Barattoonni lakkoofsi itti hin baane barnootarraa ari’amaniiru. Yeroo ammaa kana biyyi kun olaantummaa sirna Nafxanyaa leellisaa yeroo jirtutti ilmaan Oromoo gara Yuunversiitii Naannoo Amaaraa deemuu hin qaban jennee amanna. Yuunversiitiileen Oromiyaa keessa jiran barattoota keenyaaf haala mijeessuun akka fudhatan waamicha goona.
Dhumarratti, nuti barattoonni Oromoo wareegama hayyootaafi barattoota keenya darbaniitti firii goonee bilisummaa uummata keenyaa milkeessuuf hojjechuun dirqama nurra jirudha. Roorroon barattoota Oromoorra ga’u kun dhaabbachuuf sabni Oromoo bilisoomee Lammiileen Oromiyaa nagaan jiraachuu qabu. Waan ta’eef, ijibbaata falmannee kabajaa ofitti horree biyya keenya bittaa alagaa jalaa baasuuf falli amma jiru Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ijaarrachuudha. Sana milkeessuufis ni hojjenna.
Gurmuu Barattoota Oromoo Sadarkaa Olaanaa
GURMUU HAYYOOTA OROMOO (GHO)-Saminaara Jalqaba
GURMUU HAYYOOTA OROMOO (GHO)-Saminaara Jalqaba Hayyoota keenya saba keenya barsiisuuf fedhii qabaachuun biyyuma kamirrallee jiraattanii…
Gabaasaa Addaa: Iyyannaa Barattoota Oromoo Yunivarsiitii Haramaayaarraa Ariamanii
Barattoota Rasaasaan Rukutaman
Barattoota Rasaasaan Rukutaman 1 Alamuu Margaa 2 Dachaasaa Furgaasaa 3 Geetuu Kabbadaa 4 Camadaa Garbichaa…
SOCHII WBO OROMIYAA FI WARAANA ITIYOOPHIYAA LABSAME
Dhaamsa jaarmiyaa Danbalii Humna Qeerroo irraa ergame
Maqaa Qeerrootiin guddoo nagadamaa jira
Seife Nebelbal Radio Program – Interviews on July 25, 2021 (Amharic)
OMN: OSFNA 2021 day 2
Kibret: I have a couple of questions for the writer of the above write-up. I'm one of the enthusiastic supporter of…